Waxaanu suuq-geeyayaashayada siinaa dhammaan qalabyada ay u baahan yihiin | gt.io | Africa
Waxaanu suuq-geeyayaashayada siinaa dhammaan qalabyada ay u baahan yihiin.
Jaalalkeena uga faa'idi karaan
qoraaladeena xayeysiinta iyo illaha.
/ Aaladaha Suuqgeynta
Intaas waxaa dheer gunnooyinkeena cajibbka ah, Qorsheyaashadalacaada, iyo dalacaadyada ganacsiga,
Waxaan sidoo kale is gelinay galal aalado ah, qoraalo, iyo illo ku daraa jaalalkeena’
faa'idada tartanka oo u ogolaado kobac guul ah saamiyadooda suuqa.
Waxaan siinaa xal dhameystiran oo dabacsan
maareeyayaasha lacagta waaya araga ah
ee rabaan inay u keenaan macaamiishooda sida
waafaqsan summada gt.io iyo faa'idada o
ka imaaneyso gunnooyinkeena gaarka
ah iy sharuudaha ganacsiga.
Si toos ah uga soo saar foomka muhiimka ah bogga
xulufada. Foomka wuxuu qaadayaa xulufadaada aqoonsiga
linkiga gudbinta marka in dhammaan diiwaanada ee
ee foomka ayaa laguugu xilsaarayaa hoostaada.
Xoojiyo badelidaada imaan karto adiga oo saarayo
foomka (snippet of iframe code) ee websaydkaaga
hantida (bogga-websaydka iwm.) ee dooqa.
30-MAALIN MUDDADA WAQTIGA
Inta lagu jiro ololahaada suuqgeynta, haddii rajooyinka
dib loogu aadiyo bogga diiwaangelinta gt.io oo ha iska
diiwaangelin isla markaas, laakin sidaas ku samey
muddo 30 maalmood ah gudahood, weli waanu
kuu qoondeyn doonaa macmiilka sida waafaqsan
koontadaada xulufada marka inaysan
ku dhaafin wax dalacaadyo ah.
1' DIB U XISAABINTA DALACAADA
Waxaad geli kartaa fiirinta tooska ah ee
sida dalacaadahaaga loogu arruuriyo
dib u xisaabinteena dalacaada 1-ka daqiiqo.
Tani waxay u ogolaatyaa daahfurnaan buuxdo iyo
si wanaagsan u xakameyso dhinaca dalacaadyadaada.